Global Voices Mitady Tonian-dahatsoratra Amin’ny Teny Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Global Voices Mitady Tonian-dahatsoratra Amin'ny Teny Shinoa
Voadika ny 08 Marsa 2012 2:29 GMT
Mitady tonian-dahatsoratra miasa tapak'andro ny Global Voices (GV) mba hiantsoroka ny fanarahana ny lazain'olo-tsotra any amin'ny tambajotra teny-Sinoa.
Ny Tonian-dahatsoratra no misahana ny fitateram-baovao amin'ny fiteny-Sinoa ka mitady sy mandrindra ny fandraisana anjaran'ny mpirotsaka an-tsitrapo. Izy ihany koa no mamokatra sy/na manitsy ny lahatsoratra lavalava maromaro isan-kerinandro sy ny lahatsoratra fohy miaty rohy mankany amina lohahevitra, zava-miseho ary soratra mahaliana araka ny fitrangany. Ao anatin'ny asa iandraketany ny fandikateny, ny fanadihadiana, sy ny famoahana izany, ny manazava sy mikaroka ny fironana, hevitra sy izay mitranga eo amin'ny resaka sosialy sy politika ao amin'ny fifampitam-baovaon'olo-tsotra ao Azia Atsinanana.
Ny Tonia no miandraikitra ny famoahana ny fitateram-baovao feno sy malalaka hita any amin'ny fifampitam-baovao amin'ny teny sinoa araka izay tratra, toy izao manaraka izao:
Fitadiavana: mitady mpanoratra hitantara ny zava-mitranga any amin'ireo firenena ao faritra misy azy; mandrindra ny asa-soratry ny mpanoratra ka manitsy sy mamoaka ny lahatsoratra [hafatra]; ary mamelona ny vondrona Google rezionaly.
Alefa ao amin'ny tranokalan'ny Global Voices:
Hafatra [lava] 4-6 isan-kerinandro. Mety ho hafatra [lahatsoratra] avy amin'ny mpanoratra an-tsitrapo na avy amin'ny Tonia, ka mahalala tsara fa ny lahatsoratra sasany (indrindra ireo izay ilaina hadika) dia mila fahaizana amin'ny fanitsiana.
“vaovao farany” 5-10 isan-kerinandro. Mety nosoratan'ny mpanoratra an-tsitrapo na ny tonia ihany koa izany. Fohy ny lahatsoratra ary tokana ihany ny rohy miaraka aminy.
Fitateram-baovao manokana: Raha misy hamehana, avoaka mialoha araka izay tratra ny lahatsoratra raha ilaina.
Ireo izay liana ny amin'izany dia iangaviana handefa ny CV sy ny taratasim-pahavononana [amin'ny teny anglisy mazava loatra] manazava fa ianao no mety tsara amin'ilay asa ao amin'ny : adminjob AT globalvoicesonline DOT org
Hatramin'ny 21 marsa 2012 no handraisana ny fangatahan'asa.
Jereo ihany koa ny takelaka tolotr'asa ato aminay izay misy ato amin'ny Global Voices amin'izao fotoana izao.